शब्दकोश: व्यस्त विद्यार्थीको दैनिकी
स्कूलदेखि लागेको बानी, शनिबारको निश्फ्रिक्री र आरामदायी सुताइ । यो निद्रा पनि भगवान्‌ले विद्यार्थीकै लागि बनाइदिए जस्तो छ । बिहान घाम सिमलको रुखमाथिसम्म छिप्पिउन्जेल लाजै पचाएर सुतिरहेँ । कलेजको परीक्षा चलिरहेछ । आऽऽ यस्तै हो, परीक्षाको के कुरा, आउँछ-जान्छ । उसै पनि जिन्दगी जिउनु भनेकै पल-पल एउटा न एउटा परीक्षा चलिरहने प्रक्रिया त हो नि भन्ने सोचेर आफैंलाई थुमथुम्याएर ओछ्यानमा गुडुल्किरहेँ । दिउँसो नुहाउने रुटिन सधैँको शनिबारजस्तै चल्यो । विद्यार्थीको ज्यानमा डेढअक्कली ज्ञानको थुप्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो स्कूलको हेडसरले, यो ज्यानमा मयलको थुप्रो पनि उत्तिकै हुँदो रहेछ ।
अरु दिनभन्दा अलि जर्‍याकजुरुक हुनुपर्ने सुरुवाती बार मानिन्छ यो बार । सहरमा डेराको बसाइ छ, रुम पार्टनरसँग मन नमिले पनि एउटै खाटमा टम्म ढाड मिलाएर सुत्‍नुपर्ने विवशता ! परीक्षा सुरु हुन अब दुई दिन त बाँकी छ नि ! यसो हेर्दा केही पढेको छैन । परीक्षाको मुखैमा समय भए कति पढिन्थ्यो जस्तो लाग्ने, पहिले समय हुँदा भने यतिका ट्याम छँदैछ नि भनेर बरालिन मन हुने विद्यार्थीको गजब लीला हुँदोरहेछ । आज पढ्नुभन्दा बासी भातलाई ‘फ्राइ राइस'मा परिणत गरेर ‘एकल दिवा भोज’ गर्न जाँगर चल्यो ।
यो दैनिकीको लन्ठो पनि कति लेख्‍नु ? नयाँ कुरा केही हुने होइन । भोलि दिउँसो त परीक्षा आइहाल्यो । किताब हेरेको त, आँखा चल्नुसाटो अक्षर पो यताउता नाचेर तिरीमिरी देखेँ मैले त !
बिहान एकसरो पढे पनि राम्रै भयो परीक्षा । अब एक सातापछि मात्र अर्को परीक्षा । कहिले सकिन्छ र फुकेको साँढे हुन पाइने हो भन्ने पीर लागिसक्यो । आज परीक्षा सक्नासाथै साथीहरूसँग एउटा सपिङ सेन्टर चहारियो, फेन्सी सामानमा दशैँको धमाकेदार अफर आएको छ भनेर केटाहरू खूबै जोसिएका थिए । तर पसलेहरूको 'मूर्गा' बनाउने आइडिया मात्र ।
परीक्षा आएपछि एउटा कुरामा ढुक्क ढकनी हुन्छ । डेरामा आफूले खाना बनाउन छुट्टी ! आफू त खाना पकाउनभन्दा पनि अरुले बनाएको खानाको पारख गर्दै यो मीठो यो नमीठो भनेर सातो लिने सौखिन परियो । खाना पकाउने तेलदेखि कपालको जेलसम्मको जोहो गर्ने कुरामा सक्रिय उम्मेदवार रुम पार्टनर भएपछि फिक्री के कुराको ? पढे पनि नपढे परीक्षा जो आएको हुन्छ । बन्द कोठामा बसेपछि लगनसाथ पढेको प्रमाणित भइहाल्छ । चाहे कोठाभित्र सुतियोस् कि काँक्राको चिरो टोक्दै मुख-व्यायाम गरियोस् । एउटा परीक्षा सकिएको उपलक्ष्यमा मस्तीले आज स्याउँस्याउँती च्याउजस्ता एफएम खर्रर दबाउँदै मेलैसित सुनियो ।
दारी खुर्किँदा, हेन्डसम क्रिम घस्दा यत्तिकै जान्छ दिन, कतिबेला पढ्नु ? पढ्नेलाई भन्दा सिकर्मी-डकर्मीलाई कतिविघ्न हाइसन्चो छ ! दिमाग खियाउनु नपर्ने, पढ्ने नाउँमा गाईबस्तु झैं एकै ठाउँमा बाँधिनुनपर्ने । पढ्दापढ्दै बूढो हुने भइयो ! घरबाट आज पनि आएनछ घिउ र पैसा ।
आज गुड फ्राइडे । आज सुतेपछि भोलि फेरि उही अबेरसम्म आरामदायी सुताइको चिट्ठा पर्ने दिन । गुड फ्राइडेको नियमित शुभकामनास्वरुप मोबाइलबाट साथीहरूलाई छुस्स-छुस्स मिस्ड कल हानियो । उताबाट पनि फिर्ता मिस्ड कलको सराबरी वर्षा ! यति भएपछि निद्रा कसो राम्रो नपर्ला ?
[….…… घुर्रऽऽ z~z~z ……. ]
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, July 26, 2011
अविरल यात्री July 27, 2011
धाइबा जीले पाठकलाई दिने सन्तुष्टि भोजन मध्ये आजको यो रासन भने अलि नौलो र स्वादिलो लाग्यो! नयाँ नयाँ विषय वस्तुको खोज र त्यसमाथिको अनुसन्धानमा यहाँको कमजोरी खासै भेटेको छैन मैले!
Dilip Acharya July 27, 2011
छोटो- मीठो रमाइलो प्रस्तुति । सायद जम्मै कुरा सबैको नमिले पनि प्राय: विद्या्र्थी सबैको अलि अलि कथा यसमा छ र सबैले यो दैनिकीमा आफ्नो छायाँ देख्नेछन् । :)
gjab cha sir ekdam man paryo 3d lekhai cha hajurkao